Kuma ayuu ahaa Alfred Wegener? Taariikh nololeedka iyo taariikhda | Saadaasha Shabakadda
Dugsiga sare waxaad kubaraneysaa in qaaradaha aysan wali taagneyn taariikhda Dunida. Taas bedelkeeda, si joogto ah ayey u socdaan. Alfred Wegener ayuu ahaa saynisyahankii soo bandhigay aragtida duulista qaaradda markay ahayd Janaayo 6, 1921. Kani waa soo jeedin isbeddelaysa taariikhda sayniska tan iyo markii ay wax ka beddeshay fikradda is-bedbeddelka dhulka. Tan iyo markii la hirgaliyay aragtidan dhaqdhaqaaqa qaaradaha, qaabeynta Dhulka iyo badaha ayaa gebi ahaanba la beddelay.
Si qoto dheer u baro taariikh nololeedka ninkii curiyay aragtidan muhiimka ah ee abuuray muran badan. Akhriso si aad waxbadan uga ogaato 🙂
1 Alfred Wegener iyo shaqadiisa
2 Taariikh iyo bilow
3 Kadib qulqulka qaaradda
4 Safarkiisii ​​ugu dambeeyay
Alfred Wegener iyo shaqadiisa
Wegener wuxuu ahaa askari katirsan ciidanka Jarmalka, borofisar cilmiga saadaasha hawada, iyo safre heerka koowaad ah. In kasta oo aragtida uu soo bandhigay ay la xiriirto cilmiga dhulka, cilmiga saadaasha hawadu wuxuu awood u yeeshay inuu si fiican u fahmo xaaladaha lakabyada gudaha ee dhulka iyo inuu ku tiirsanaado caddeynta sayniska Wuxuu awooday inuu si isdaba joog ah u faahfaahiyo barakicinta qaaradaha, isagoo ku tiirsanaa cadeymo xagga cilmiga dhulka ah.
Kaliya maahan caddaynta juquraafi, laakiin cilmiga nafleyda, qadiimiga, saadaasha hawada iyo juqraafiyeed. Wegener waxay ahayd inay fuliso daraasado qoto dheer oo ku saabsan pelomagnetism-ka dhulka. Daraasadahaani waxay u adeegeen aasaaska aragtida hadda jirta ee saxanka tectonics. Waa run in Alfred Wegener uu awood u yeeshay inuu horumariyo aragtida ay qaaradaha ku dhaqaaqaan. Si kastaba ha noqotee, isagu ma uusan helin sharraxaad lagu qanci karo oo ku saabsan waxa awood u leh inuu dhaqaajiyo.
Sidaa darteed, ka dib daraasadaha kala duwan ee ay taageerayaan aragtida ah qulqulka qaaradda, sagxadaha badda iyo paleomagnetism-ka dhulka, saxanka tectonics ayaa soo ifbaxay. Si ka duwan waxa maanta loo yaqaan, Alfred Wegener wuxuu ku fikiray dhaq dhaqaaqa qaaradaha ee ma ahan taarikada tectonic. Fikradani waxay ahayd oo ay sii ahaaneysaa mid naxdin leh sida, haddii ay sidaas tahay, waxay soo saari doontaa natiijooyin masiibo ah oo ku saabsan noocyada aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku lug lahayd geesinimada si loo qiyaaso xoog weyn oo mas'uul ka ahaa barakicinta qaaradaha oo dhan. Taasi waxay u dhacday sidan waxay ka dhigan tahay isu geynta guud ee Dunida iyo badaha intii lagu jiray waqtiga cilmiga dhulka.
In kasta oo uu heli waayey sababta ay qaaraduhu u dhaqaaqaan, haddana wuxuu lahaa mudnaan weyn inuu ururiyo dhammaan caddaymaha suurtagalka ah ee xilligiisii ​​lagu aasaasayey dhaqdhaqaaqan.
Taariikh iyo bilow
Markuu Wegener ka bilaabay adduunka sayniska, wuxuu ku faraxsanaa inuu sahmiyo Greenland. Waxa kale oo loo soo jiiday saynis aad u casri ah: saadaasha hawada. Waqtigaas ka dib, cabbiraadda astaamaha jawiga ee mas'uulka ka ah duufaanno badan iyo dabeylo aad ayey uga dhib badnaa uguna saxsanaayeen. Wali, Wegener wuxuu rabay inuu ku dhiirado cilmigan cusub. Diyaargarowgii safaradiisii ​​Antarctica, waxaa lagu baray barnaamijyo dhaadheer oo dhaadheer. Wuxuu kaloo ogaa sida loo barto isticmaalka qaniinyada iyo buufinnada loogu talagalay kormeerka saadaasha hawada.
Wuxuu kor uqaaday awoodiisa iyo farsamadiisa aduunka ee hawada, ilaa heer uu gaaro rikoor caalami ah sanadkii 1906, isaga iyo walaalkiis Kurt. Rikoorka uu dhigay wuxuu ahaa inuu duulo 52 saacadood oo aan kala go ’lahayn. Diyaargarowgaas oo dhami wuxuu kasbaday markii loo doortay inuu noqdo khabiir saadaasha hawada socdaal deenish ah oo u kicitimayay waqooyi-bari Greenland. Safarku wuxuu socday ku dhowaad 2 sano.
Intii uu Wegener joogay Greenland, wuxuu soo qaatay daraasado cilmiya oo kala duwan oo ku saabsan saadaasha hawada, cilmiga geology, iyo glaciology. Sidaa awgeed, si sax ah ayaa loo samayn karaa si loo dhiso caddayn diidaysa qulqulka qaaradda. Intii lagu guda jiray safarka wuxuu lahaa xoogaa carqalado iyo dhimasho, laakiin kama aysan hor istaagin inuu helo sumcad weyn. Waxaa loo tixgeliyey inuu yahay karti-hawleed karti leh, iyo sidoo kale safar socdaal ah.
Markuu ku noqday Jarmalka, wuxuu uruuriyey tiro aad u tiro badan oo ah saadaasha hawada iyo saadaasha hawada. Sannadkii 1912 wuxuu safar kale oo cusub sameeyey, markan wuxuu ku sii jeeday Greenland. Wada sameeyey Baadhe deenish ah JP Koch. Safar aad u weyn ayuu ku soo maray lugta barafka dushiisa. Safarkan wuxuu ku dhamaystay waxbarashadiisii ​​cilmiga cilmiga cimilada iyo glaciology.
Kadib qulqulka qaaradda
Wax yar baa laga yidhi wixii Alfred Wegener sameeyay ka dib bandhigii baaxadda lahaa ee qaaradda. 1927, wuxuu go'aansaday inuu safar kale ku aado Greenland isagoo taageero ka helaya Ururka Cilmibaarista Jarmalka. Ka dib khibraddii iyo sumcaddii ay ku heshay aragtida qulqulka qaaradda, wuxuu ahaa kan ugu habboon hoggaaminta safarka.
Ujeeddada ugu weyni waxay ahayd lin la dhiso xarunta cimilada taas oo loo oggol yahay in lagu cabiro cimilada si nidaamsan. Sidan ayaa lagu heli karaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan duufaannada iyo saamaynta ay ku leeyihiin duulimaadyada transatlantic. Hadafyo kale ayaa sidoo kale loo dejiyay qaybta saadaasha hawada iyo glaciology si loo helo aragti ku saabsan sababta ay qaaraduhu u dhaqaaqeen.
Safarkii ugu muhiimsanaa ilaa waqtigaas waxaa la qaaday sanadka 1029. Baadhitaankan, xog aad u khusaysa ayaa la helay wakhtiga ay ku jireen. Waana inay suurtagal ahayd in la ogaado in dhumucda barafka ay ka dhaaftay 1800 mitir oo qoto dheer.
Safarkiisii ​​ugu dambeeyay
Safarkii afaraad iyo kii ugu dambeeyay waxaa lagu qaaday 1930 iyadoo dhibaatooyin waaweyn laga soo bilaabo bilowgii. Alaabooyinka ka imanaya xarumaha gudaha ayaan ku iman waqtigii loogu talagalay. Jiilaalku si xoog leh ayuu ku soo galay waxayna ahayd sabab ku filan Alfred Wegener inuu isku dayo inuu bixiyo saldhig hoy. Aagga waxaa hareeyay dabaylo xoog leh iyo baraf, taas oo sababtay in Greenlanders la kireystay ay cidla noqdaan. Duufaantan ayaa halis gelisay badbaadada.
Kuwa yar ee ka haray Wegener waa inay la silcaan inta lagu jiro bisha Sebtember. Iyada oo ay adag tahay in la helo wax alaab ah, waxay yimaadeen saldhigga bishii Oktoobar iyaga iyo mid ka mid ah asxaabtoodii oo ku sigtay in uu barafoobo. Wuu awoodi waayey inuu safarka sii wato. Xaalad quus ah oo aan cunno iyo shidaal midna lahayn (waxaa meel u bannaan oo keliya laba ka mid ah shanta meesha ku taal).
Maaddaama qodobbadu ahaayeen wax aan jirin, waxaa lagama maarmaan noqotay in qodobbada la aado. Wegener iyo lamaanihiisa Rasmus Villumsen ayaa ahaa kuwa ku soo noqday xeebta. Alfred wuu dabaaldegay sannad-guuradiisii ​​kontonaad markay ahayd 1dii Noofambar, 1930 oo subixii xigay u baxay si aan u soo irsado. Intii lagu guda jiray raadinta saadka waxaa la ogaaday inay jiraan dabeylo xoog leh oo dabeyl iyo heerkulka -50 ° C. Intaas ka dib, dib dambe looma arag iyagoo nool. Meydka Wegerer ayaa laga helay barafka hoostiisa May 8, 1931, isagoo ku duuban bacda uu ku seexdo. Lamaanaha wehelkiisa iyo xusuus-qorkiisa midna lama soo celin karin, halkaasoo fekerkiisa ugu dambeeya uu ahaan lahaa.
Jidhkiisu wali wuu jiraa, si tartiib tartiib ah ayuu ugu dhaadhacayaa glacier weyn, oo maalin uun sabayn doona sida baraf oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Kuma ayuu ahaa Alfred Wegener?
Wax walba waa wax aad u wanaagsan oo dhameystiran, sawirada, qoraalada ...